नागरिक जिउधनको निम्ति सुरक्षा योजना जति कडा छ, जुवातास र मापासेमा त्यति नै कडाई छ : प्रजिअ, एसपी | Purnapusti
“जुवातास र मापासेमा भेटिनेले दशै भन्न पाउने छैन”
चाँडपर्व हाँसीखुसी र उमंगको हिसावले मात्र नभई सुरक्षा सम्बेदनशिलताको हिसावले पनि हेरिन्छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो भएमात्र चाँडपर्वको उमंग छाउदछ । तसर्थ, चाँडपर्व आएसंगै देशैभर सुरक्षा व्यवस्था सरकारले मिलाएको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार कडाई गरेको हुन्छ । नेपालमा मनाईने मुख्य पर्वहरु मध्येको दशैं भित्रिसकेको छ । लगत्तै तिहार, छठ पर्व रहेका छन् । यस सन्दर्भमा उदयपुर जिल्लामा पनि चाँडबाड विशेश सुरक्षा योजना लागू भएको छ । स्थानीय प्रशासले प्रहरी मार्फत लागू गरेको सुरक्षा योजना कस्तो छ ? जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? नागरिकहरुले कत्तिको ढुक्कसंगले हिड्डुल, खानपिन गरेर उल्लासमय ढंगले पर्व मनाउन सक्छन् ? लवायतका सवालमा पूर्णपुष्टिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुबबहादुर खड्का र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरसंग सवांद गरेको छ । प्रस्तुत छ, पूर्णपुष्टि संवाद । (यस संबादको भिडियो www.purnapusti.com र पूर्णपुष्टिको अफिसियल युट्युव च्यानल Purnapusti TV मा हेर्न सक्नुहुनेछ ।)
पूर्णपुष्टि : चाँडबाँडमा उदयपुर जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?
प्रजिअ : दशैं उल्लासपूर्ण रहोस् सबैमा शुभकामना ! प्रहरी र प्रशासनले मिलेर सुरक्षा योजना तयार गरेका छौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिराखेका छौं । योजना प्रहरीमार्फत लागू भईरहेको छ । जसले उदयपुरबासी र उदयपुर हुदै आवागमन गर्नुहुने सम्पूर्ण यात्रुवर्गहरुलाई समेटेको छ ।
एसपी : दशैं उल्लासमय र सुरक्षित होस् । दशैंतिहार विशेष सुरक्षा योजना २०७६ लागू गरिरहेका छौं । यसमा हामीले यातायात क्षेत्रलाई अलि प्राथमिकता दिएका छौं । यतिबेला धेरै जसो यातायात क्षेत्रका विबृतिहरु फैलिने कुरादेखि लिएर घटनाहरु हुन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष चेकजाँचमा जोड दिएका छौं । चेक प्वाईन्टहरु थपेका छौं । ट्राफिकको पहुँच भएकोमा ट्राफिकसहित, नभएको ग्रामिण क्षेत्रमा प्रहरीले मात्रै पनि चेकजाँच राखेका छौं । ट्राफिकसहितको आठओटा र प्रहरीमात्रको २२ ओटा गरी ३० ओटा चेक प्वाईन्टहरु छन् । लालपत्ता, कोठु, जलजले, बेलसोत, घुर्मी जस्ता नाकाहरु, भित्री नगर एरिया, साउने जाने पुल, बेल्टार जाने पुल र वसपार्कहरुमा सुरक्षा चेकजाँच कडा पारिएको छ ।
यात्रुहरुको आउने जाने क्रम ठूलो हुन्छ । गाईघाटमा भित्रिनेको संख्या ठूलो हुन्छ । यात्रु भित्रिदा राम्रा, नराम्रा व्यक्तिहरु भित्रने गर्छ । फरार अपराधि पनि आउन सक्छ, त्यस्तालाई खोजि रहेका छौं । ४३ जना समाति पनि सकेका छौं । बसपार्कमा ट्राफिक, प्रहरी र यातयात व्यवसायिसहित यात्रु सहायकता कक्ष पनि सञ्चालन गरिएको छ । यसले राम्रो नतिजा पनि दिईरहेको छ । वाहिरबाट आएका गाडी, यात्रुलाई र बाहिर जाने गाडी, यात्रुलाई सबैलाई चेकजाँच गरेर पठाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो किनभने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका समुह, प्रतिबन्धित समुहले यहिबेला गतिविधि गर्नसक्छ, त्यो कुराहरु नियन्त्रण गर्नका लागि चेकजाँचमा कडाई गरिएको छ ।
यसमा सशस्त्र प्रहरी बलसंग पनि समन्वय छ । बढि वित्तिय कारोवार हुने ठाउँहरु, सुनचाँदी पसलहरुमा प्रहरीको विशेष निगरानी र गस्ती रहेको छ । पैदल गस्ती, मोटरसाइकल गस्ती र गाडीबाट गस्ती छ । सबै क्षेत्रलाई कभर गर्नेगरी गरिएको छ ।
पूर्णपुष्टि : सुरक्षा सम्बेदनशीलताको हिसावले उदयपुर जिल्ला कस्तो हो ? सुगम र दुर्गम दुबै क्षेत्र भएको उदयपुरमा सबैतिर समेट्न सजिलो, गाह्रो के छ ?
प्रजिअ : बाहिरबाट धेरै मान्छे आउने हुन्छ । बाहिर जानेभन्दा आउने बढी भएकाले आगन्तुकको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आवागमन बढि हुने रोड हो यो । यात्रुहरुको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो । सिस्टमबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छ । निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरु पनि छन् । त्यसैगरी आम जनता, मिडिया, सबैले कुनै न कुनै रुपले सुरक्षामा सहज पुर्याईरहेकै हुन्छ । प्रणाली स्वतः चलायमान हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरेका छौं । सुरक्षा प्रणाणीभित्र सुरक्षा निकाय स्वतः पर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाहेक समाजमा देखिने पत्रकारजगत, विभिन्न संघसंस्थाहरु, यातायात व्यवसायी, चालक लगायत सबै सिस्टममा आवद्ध हुने गरी सिस्टमको विकास गरिएको छ ।
पूर्णपुष्टि : चाँडबाडको मौकामा चोरी, डकैती, कालाबजारी बढि नै हुनेगर्छ । त्यसमा सर्बसाधारणले अपनाउनुपर्ने सजगता के हो ?
प्रजिअः हामीले नागरिकको जिउ र धन सुरक्षा गर्ने हो । बजारमा आफुले उपभोग गर्ने सहि सामान प्राप्त हुनु नहुनुुसंग पनि जोडिन जान्छ । त्यसैले हाम्रो पक्षले गर्नुपर्ने बजार अनुगमन जस्ता कुराहरु गरिरहेका छौं । उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सरोकारवालासंग बसेर बजारलाई सुद्ध, व्यवस्थित गर्नका लागि छलफल, अन्तरक्रिया गरेका छौं । व्यक्तिहरुले पनि केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । जसले गर्दा उहाँहरुको धन र जीउ दुबै सुरक्षित हुन्छ । सामान किन्न बजार जाँदा त्यो सामानको भाउ सोधौं । त्यसको म्याद हेरौं । मूल्य टाँसेको छ भने दुईचारवटामा हेरौं । जहाँ उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि आप्mनो आवश्यकता पुरा हुने कुन छ । त्यो किनौं । हतारिएर किन्ने बानी छोडौं । यो आव्हान गर्न चाहन्छु । दोस्रो तथाभावी खर्च गर्न होडबाजी गर्ने प्रचलन छ । त्यसले आप्mनो पनि सम्पत्ति नास भाको छ, त्यो देखेर छिमेकीलाई पनि आप्ठेरो परेको छ । उसले पनि बाध्यता वस् छिमेकले गरेको देखेर, बच्चाबच्चीले देखेर फजुल खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुने गरेको छ । यो अनावश्यक खर्च घटाउनका लागि मितव्ययी बनौं, आत्मपरक बनौं । आवश्यकता र आम्दानी अनुसार मात्रै खर्च गरौं । अर्को कुरा यात्रा गर्ने कुरामा निश्चित समयमा कहाँबाट कतिबेला गाडी छुट्छ, भेटिन्छ की भेटिदैन समयको ख्याल गरेर हिडौं । यात्रामा हिड्दा अपरिचित व्यक्तिहरुसंगको संगतै नगर्ने भन्ने त हैन, तर झट्ट विश्वास सुम्पिने काम नगरौं । जे कुराहरु गर्दा कानून दायराभित्र बसेर गरौं । कानुनलाई पालना गरियो भने त्यसबाट हुने कठिनाईमा कानुनले नै सहयोग गर्नेछ । तर, आफुले कानुनबाहिर गतिविधि गरियो भने र त्यसबाट कुनै कठिनाई आयो भने कानुनले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले कानुनको परिधिभित्र बसेर काम गर्ने कोशिस सबैले गरौं ।
पूर्णपुष्टि :अहिलेको अवस्थामा कस्ता खालका घटनाहरु बढि आउने गरेका छन ?
एसपी : चाँडबाँडको बेलामा बढि जसो चोरी र लुटपाटको घटना हुन्छन् । त्यसैले त्यसैलाई फोकस गरेर सुरक्षा योजना प्रभावकारी रुपमा अगाडी लैजाने काशिस गरिरहेका छौं । करिब चारसय सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । हाम्रो प्रण भनेको त्यस्ता चोरी तथा लुटपाटका घटना सुन्य बनाउने लक्ष हो । प्रहरी र प्रशासन लागेको छ । साथसाथै नागरिकहरु आफै पनि सचेत हुनुपर्छ । केही नभएपनि सुचना चाँही दिनुपर्यो । अनि विशेष गरी यातायातको क्षेत्रमा बढि फोकस दिएका छौं । यातायातको क्षेत्रमा चाँडबाडको बेला धेरै समस्या देख्ने गरिन्छ । ओभर लोडको कुरा, सिट क्षमता भन्दा बढि राख्ने, टिकटमा महंगी, ठगी र बढिजसो जाँडरक्सी, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र सवारी साधन चलाउने । यो प्रबृति धेरै देखिएकाले न्यूनिकरण गर्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
पूर्णपुष्टि : सर्बसाधारणले तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्ने सजिलो माध्यम के हो ?
एसपी : सबभन्दा सजिलो उपाय १०० मा फोन गर्ने नै हो । जहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ । बाटोमा केही समस्या पर्दा १०० मा कल गर्दा सम्बन्धीत जिल्लाको प्रहरीमा जान्छ ।
पूर्णपुष्टि : चाँडबाँडमा कृतिम अभावको कुराहरु पनि आउछ । अहिले त्यस्तो समस्या आको छ की छैन ?
प्रजिअ : यो समस्या विगतमा थियो र अहिले पनि हुनसक्छ कि भनेर उद्योग वाणिज्य संघ मात्र हैन, त्यसका विभिन्न विषयगत क्षेत्र समेट्न सक्ने प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रिया छलफल गरेका थियौं । त्यसमा नेपालकै उत्पादनका चिनी पर्याप्त भएको जानकारी दिएका छन् । ग्याँस र पेट्रोलको अभावको सम्भावना हो । उहाँहरुलाई पनि बोलाएर बुभ्mदा अभाव हुने अवस्था नरहेको कुराले आश्वस्त पारेका छन् ।
पूर्णपुष्टि :अहिलेसम्म कुनै गुनासो आएको छ की छैन ?
प्रजिअ : अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन । निश्चित बजार मात्र नभएकाले अव कृतिम अभाव गर्ने सम्भव छैन ।
पूर्णपुष्टि : चाँडबाडको मौकामा मानिस पर्व मनाउने कुरामा व्यस्त हुन्छन् । प्रहरी पनि नागरिक सुरक्षा र अन्य कुराहरुमा व्यस्त हुन्छ भन्ने ध्येयबाट चोरी निकासी, आपराधिक गतिविधि हुनेगर्छन । त्यस्ता पक्षहरुले यस्ताबेला बढि मौका छोप्ने गरेको पाई्रन्छ । यसमा प्रशासनको सतर्कता के छ ?
प्रजिअ : हाम्रो सुरक्षा प्रणालीभित्र धेरै कुरा छन् । यो बेलामा हुनसक्ने सम्भावित अपराधजन्य कर्महरु सबैका लागि एउटै सिस्टमले सबै काम गर्छ । त्यो ढंगले व्यवस्थापन गरेका छौं । अघि एसपी सापले कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय १०० नम्बर दिनुभएको छ । उदयपुरको हकमा ९८५२८१७७७७ सिडियो र ९८५२८१५५५५ एसपीको हो । यति भएपछि सर्बसाधारणलाई सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ ।
पूर्णपुष्टि : सम्बेदनशिल किसिमका घटना भएमा तुरुन्त रोक्न वा हेर्नलाई प्रहरी तयारी कस्तो छ ?
एसपी : चेक प्वाईन्ट छ । त्यसमा हामी सबै कुरा हेर्छौं । नाकाहरुमा चौविसै घण्टा चेकजाँच गर्छौं । विगतमा जंगल एरियामा यात्रु बसलाई रोक्ने, लुटपाट गर्ने त्यो घटनाहरु भाको हुनाले गस्तीले राजमार्ग सुरक्षा गर्ने, कहिले काँही ठूलै घटना घट्छ, त्यसमा १० जनाको सुरक्षाटोली हुन्छ । त्यसले सम्पूर्ण जिल्लाको बस्तुस्थिति निगरानी गरिरहेको हुन्छ । विश्लेषन गरिरहेको हुन्छ । कहाँ कति मान्छे पठाउने भन्ने कुरा, कहाँ के भईरहेको छ भन्ने कुरा र आवश्यक पर्यो भने डिएसपीको कमाण्डमा १५ जनाको टोली रिजर्ब फोर्स हुन्छ । त्यस्तै इनिस्पेक्टरको कमाण्डमा क्विक रियास्क्सन टिम भन्ने हुन्छ । जस्तो त्यहाँको प्रहरीले गर्न सकेन भने जिल्लाबाट इनिस्पेक्टरको कमाण्डमा टोली जान्छ, त्यसले पनि भ्याएन भने डिएसपीको टोली जान्छ । यसरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएको छ ।
अघि थप्न खोजेको कुरा के हो भने पब्लीक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो । संकास्पद अवस्था, मानिस देखियो भने प्रहरीलाई खबर गर्ने, बैंकहरुका गार्डहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सुरक्षा सतर्कताबारेमा ओरेन्टेशन गरेका छौं । सटर लाएरभित्र बस्दा बाहिर के हुन्छ थाहा हुदैन, बाहिर के हुदैछ थाहा पाउनका लागि त बाहिर नै बस्नु पर्यो । त्यस्तै राम्रो लाईटको व्यवस्था गर्नुपर्यो । सुनचाँदी पसल, घरहरुमा कम्तिमा यो दशै, तिहार, छठसम्म कम्पाण्डसम्म उज्यालो राख्नुपर्यो । चोरी गर्ने मान्छे उज्यलो छ भने डराउछ । आउने हिम्मत गर्दैन । हुनसक्छ भने सिसि क्यामेरा घर कम्पाउण्डसमेत कभर गर्ने गरी राखौं । सिसि क्यामेरा छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ हिम्मत गर्दैन अर्थात घटना घटिहाल्यो भने पनि अनुसन्धानमा र पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।
पूर्णपुष्टि : त्यसो भए यो वर्षको चाँडपर्व, सुरक्षाको हिसावले ढुक्कले मनाउन सक्ने अवस्था छ ?
प्रजिअ : एकदम छ । दशैको बेलामा यात्रा गछौं गाडीमा, चालक, सहचालकलाई रिस उठाउने कामहरु पनि यात्रुले गर्छौं भने यदि त्यसो गर्यौ भने उ पनि मान्छे हो उसलाई रिस उठ्न सक्छ । त्यसैले गाडीमा धैर्यतापूर्वक, संयमतापूर्वक यात्रा गरौं । चालक वा सहचालकले कुनै कमजोरी गरे, ओर्लिसकेपछि बसपार्कमा रहेको हेल्पडेक्स छ, त्यहाँ प्रहरीलाई सुचित गरौं ।
अर्को चाँही चालक, सहचालकलाई ओरेन्टेशन पनि गरेका छौं । आम रुपमा भन्न चाहन्छु । अनेकौ मान्छे यात्रा गर्छन् । त्यस्ता गलत मान्छे परे भने धैर्य गर्नुहोस् । सरासरी त्यस्तो मान्छे लिएर बाटोमा प्रहरी कार्यालय छन् । त्यहाँ लगेर जिम्मा लगाएर हिड्नुस् भन्ने अनुरोध गरे ।
दशैं उल्लासको पर्व हो यसमा जुवातास, जाँडरक्सी जस्तो मादक पदार्थ यो उल्लासको विपरित वातावरण सिर्जना गर्दछ । त्यसैले यहाँहरुले त्यसो नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हुन्छ । हामी सुरक्षा निकायसंग सम्बद्ध मानिसहरु विभिन्न दिशामा घुमिरहेका हुन्छौ । आवस्त भएर, विश्वस्त भएर दशैं मान्नुहोस् । दशैं उल्लासमय होस्, शुभकामना !
एसपी : सबै मिलेर सुखमय बनाउने हो । कतै दुखमय नहोस् भन्ने तिर सबै सचेत हुनुपर्छ । दुखमय कहाँनिर हुन्छ भने दशैंतिहारको नाममा विकृति विसंगतिका कुरा गर्न तिर लाग्यौ भने जस्तै जुवातास, म यहि मिडियामार्फत आम नागरिकलाई भन्छु विगतमा के भयो भन्ने भन्दा पनि कानुन विपरितको कार्य कसैले गर्यो भने हामी छोड्दैनौं । जस्तो दशैंको दुईदिन अगाडि कुनै मान्छे तास खेल्दाखेल्दै समातियो भने दशैं गयो । त्यसमा सुखमय बनाउने कि दुखमय बनाउने भन्ने आफैमा रह्यो । अर्को मादक पदार्थ सेवन गरेर यदि सवारी साधन चलायो भने हामीले मुद्दै चलाउने भनेका छौं । किन भने त्यसले गर्दा जनधनको क्षती धेरै भयो । हामीले सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरिएको कारण जनधनको क्षती रोक्नलाई नै हो । यदि त्यो रोक्ने कुरामा कसैले त्यसको उलंघन गर्छ भने हामीले मुद्दै चलाउछौं । जस्तो मेरो मोटरसाईकल, मैले खाएर चलाए भन्ने होइन । सेवन गरेर मोटरसाईकल चलाउन पाईएन । चढ्न पाईयो । खाएको मान्छेले हेण्डिल समाउन पाएन । स्टेरिङ समात्नु भएन । पछाडी बस्नु पर्यो । अर्कोलाई बोलाउनु पर्यो ।
जुवातासहरुको कुरामा हामी कडाईका साथ छौं । यदि त्यस्तो कोइ छौ भने छोड्नोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु । नत्र भने प्रशासनले समातिसकेपछि मुद्दा चल्छ, दशैं मान्न उहाँले पाउनुहुन्न । मापासेकै कारण धेरै दुर्घटना भएका छन् विगतमा । गतवर्ष उदयपुरमा ४३ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यो पनि बढि चाँडपर्वमा भएको हुनाले अहिले हामीले त्यसलाई रोक्न कोशिस गरिहेका छौं । यसमा सबै आमनागरिकहरु, यहाँका मिडियाहरुको साथसहयोग हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु ।